N'ogbe JOYBOLD JBHZ-03 80kg Max Load 2.5h Nchaji Oge 150W Brushless Motor N'ogbe Electric Kick Scooter Manufacturer and Supplier | Jinbang
Vehiclesgbọ ala ndị nwere ike eletriki na-ezo aka n'ụgbọ ala mechatronics nke na-eji batrị dị ka ike inyeaka na-adabere na obere obere ụgbọ ala ma kwadebere ya na moto, njikwa, batrị, aka, njikwa breeki na ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ na usoro ihe ngosi. Ichaji batrị tupu ojiji.
Product aha: Electric skuuta
Iche: 6km (65kg na 12km / h)
Max. Ibu: 80kg
Oge nkwụ ụgwọ: 2.5h
Ọsọ: max.12km / awa
BMS: -Mefe kpo oku, Circuit dị mkpirikpi, Nchedo karịrị na ugbu a
Batrị: 18650 Cell * 6, 2,5 Ah, 21,6 V
Moto: Igwe Brushless 150W
Chaja: Ntinye AC / 100-240 V, Npụta 42V, 1.5A
Breeki: Abụọ breeki System (Front Electronic Brake na N'azụ Diski breeki)
Wheel: n'ihu Pu wheel 8 ″, n'azụ roba taya 8 ″
Nnapu: n'ihu supension na azụ nkwusioru
Breeki: electronic ụkwụ Pedal breeki (n'azụ wheel)
Asambodo: OA (EN14619), RoHs, UN38.3, Nyocha MSDS / Ikuku na Oke Osimiri
Mbukota: Igbe mkpọsa (86 * 16 * 34 cm / GW 9.5kg / NW 8kg), 1 PC / ctn
Akpa Loading: 600 PC / 20GP, 1500 PC / 40HQ
1. Nkwupụta anyị dabere na USD: RMB = 1: 7, ozugbo ọnụego mgbanwe na-agbanwe karịa 3%, ọnụego ga-edobe.
2. Ajuju ọ bụla pls kpọtụrụ anyị site na email ma ọ bụ oku ekwentị !!! Anyị kacha mma ọrụ alwasy kwụ ọtọ n'ihi na ị !!!
Ọ bụrụ na ị na-eji ụgbọ eletrik na oge oyi, ị ga-enwe mmetụta dị oke nbelata ihe agbara (nke doro anya na ugwu). nke a bụ ihe ịtụnanya. N'ebe dị obere ọkụ, ikike nnabata batrị na-ebelata, ebe viscosity electrolyte na-abawanye na nguzogide nke electrochemical na-abawanye, na-eme ka mbelata ikike batrị. Ya mere, ndị na-eri ihe kwesịrị izere ịhapụ ụgbọ ala eletrik n'otu abalị ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ na ọnọdụ okpomọkụ dị ala mgbe ha na-eji ya n'oge oyi.
1. Chajịa batrị tupu i jiri ụgbọ eletrik ọhụrụ ahụ azụrụ
N'ihi na enwere usoro ntụgharị maka batrị ahụ site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ntinye nke ụgbọ ahụ na ndị ahịa. N'ime oge ntụgharị, batrị ahụ agaghị enwe ike zuru oke n'ihi nkwanye onwe ya. Yabụ, a ga-eji chaja ihe dị na ya batrị batrị ruo mgbe o zuru. Otu ihe a metụtara batrị ndị ọhụrụ azụrụ.
2. Ọ bụrụ na ịnọghị njem njem ogologo oge, a ga-enwerịrị ụgwọ batrị zuru ezu tupu nchekwa mgbe ụgbọ eletriki na-ejighị ya, batrị ga-eweghachikwa ya otu ugboro n'ọnwa n'ọdịnihu iji zere sulfation batrị n'ihi ogologo oge - nchekwa nke oge nke ike ọnwụ. Ma mee ka ikike daa ma ọ bụ ọbụna wepụ.
Nlezi anya maka iji igwe eletrik eletrik na ọkọchị
1) Zere ikpughe anyanwụ na-ekpo ọkụ;
2) A na-amachibido ịgba ụgwọ na gburugburu ebe obibi dị elu;
3) Zere ịkwụ ụgwọ ozugbo ịkwọ ụgbọala n'okpuru okpomọkụ dị elu iji gbochie oge odori site na ịdị ogologo (na-ejikarị 8 awa);
4) Mgbe igbe ike dị ọkụ ma ọ bụ na ọ naghị acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgbe batrị na-akwụ ụgwọ, ị kwesịrị ịga ụlọ ahịa batrị ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa mgbe a na-ere ahịa iji lelee ma jigide batrị ma ọ bụ chaja n'oge.
Nke gara aga: Okenye Scooter JBHZ 57
Osote: E-skuuta JBHZ 02
E-skuta JBHZ K01